Ọ Nọbu n’Òtù Ọjọọ, Ọ Na-eji Égbè Ya Aga Ebe Ọ Bụla | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
M Na-eji Égbè M Aga Ebe Ọ Bụla M Na-aga
Akụkọ Annunziato Lugarà kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1958
ABỤ M ONYE: ỊTALI
NDỤ M BIRI: ANỌBU M N’ÒTÙ NDỊ NA-EME IHE IKE
A mụrụ m n’obodo Rom, ọ bụkwa ebe ahụ ka m nọ too. Ebe anyị bi bụ n’ebe ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha bi. Ihe siiri anyị ezigbo ike. Amaghị m onye mama m bụ, mụ na papa m adịghịkwa ná mma. Mgbe m na-eto, mụ na ndị ọjọọ kpawara. Ọ bụ otú ahụ ka m si kpawazie àgwà ka ndị agboro.
M bidoro izu ohi mgbe m na-erubeghị afọ iri. Mgbe m dị afọ iri na abụọ, m si n’ụlọ anyị gbapụ. Ihe ahụ bụ nke mbụ m gbapụrụ n’ụlọ anyị. Papa m bịara ihe dị ka ugboro abụọ n’isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kpọrọ m laa n’ụlọ. Mụ na ndị mmadụ na-esekarị okwu. Oge niile na-abụrụ m tigbuo zọgbuo. O nweghịkwa onye mụ na ya na-adị ná mma. Mgbe m dị afọ iri na anọ, m gbapụrụ n’ụlọ kpamkpam. M bidoro ṅụwa ọgwụ ọjọọ, birikwa n’okporo ámá. Ebe ọ bụ na enweghị m ebe m na-ehi ụra, m na-akpaka ụgbọala, banye na ya hie ụra. O ruo isi ụtụtụ, mụ apụta gaa chọọ ebe e nwere mmiri ọṅụṅụ ma jiri ya kwọọ ihu na aka.
M ghọrọ aka ochie n’izu ohi. M na-adọnara ndị mmadụ akpa ha, na-agakwa n’ụlọ ndị mmadụ n’abalị ezu ohi. A bịara mara m ka onye ọjọọ. O teghị aka, ndị nọ n’òtù ọjọọ akpọọ m ka m soro ha. Mgbe m sowere ha, m zuweziri ohi n’ụlọ akụ̀. Ebe ọ bụ na m na-esi ọnwụ, ndị òtù m bidoro kwanyewere m ùgwù. M na-eji égbè m aga ebe ọ bụla m na-aga. M na-etinyedị ya n’okpuru pilo m ma m chọọ ihi ụra. Ihe e ji mara m bụ ime ihe ike, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, izu ohi, ikwu okwu ọjọọ, na ibi ndụ rụrụ arụ. Ndị uwe ojii na-achọgharị m mgbe niile. Ha nwụchiri m ọtụtụ ugboro. Ọ na-abụ m pụta n’ụlọ mkpọrọ, tupu a mara ihe na-emenụ, mụ emeekwa ihe ọjọọ ọzọ, a tụọkwa m mkpọrọ. Ihe a megidere ruo ọtụtụ afọ.
E nwere mgbe m si n’ụlọ mkpọrọ pụta, mụ asị ka m gaa leta nwanne mama m. Amaghị m na ya na ụmụ ya abụọ aghọọla Ndịàmà Jehova. Ha gwara m ka m soro ha gaa ọmụmụ ihe ha. Ebe ọ bụ na m chọrọ ịmata otú ha si amụ ihe, m sooro ha gaa. Mgbe anyị rutere n’ebe ha na-amụ ihe, m siri ọnwụ na m ga-anọ n’ebe dị nso n’ọnụ ụzọ ka m na-ahụ ndị na-abata abata na ndị na-apụ apụ. M jikwa égbè m.
Ọmụmụ ihe ahụ m gara mere ka ndụ m gbanwee. Ọ dị m ka m̀ nọ n’ụwa ọzọ. Ndị bịara kelee m kelere m nke ọma, mụmụọkwara m ọnụ ọchị. M ka na-echeta otú Ndịàmà Jehova ahụ m hụrụ si nwee obiọma, bụrụkwa ndị ezigbo mmadụ. Otú ha si kpaso m àgwà dị ezigbo iche n’otú ndị ọzọ si akpaso m àgwà.
Ndịàmà Jehova bidoro ịkụziri m Baịbụl. Ihe ndị m na-amụta mere ka o dokwuo m anya na m kwesịrị ịgbanwecha otú m si ebi ndụ. M chebaara ihe e kwuru n’Ilu 13:20 echiche. Ebe ahụ sịrị: “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe, ma ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.” M ghọtara na m kwesịrị ịhapụ òtù ọjọọ ahụ. Ọ dịrịghị m mfe, ma Jehova nyeere m aka, mụ ahapụ òtù ahụ.
M bidoziri ime ihe m na-emetụbeghị, ya bụ, ịna-ejide onwe m ka m ghara ime ihe ọjọọ
M bidoro ileta onwe m anya ka m na-adị mma n’anya. M gbalịsikwara ike kwụsị ịṅụ sịga na ọgwụ ọjọọ. M kpụrụ ogologo ntutu isi m, kwụsị ịgba ọla ntị, kwụsịkwa ikwu okwu ọjọọ. M bidoziri ime ihe m na-emetụbeghị, ya bụ, ịna-ejide onwe m ka m ghara ime ihe ọjọọ.
Kemgbe ụwa m, ịgụ ihe na ịmụ ihe anaghị atọ m ụtọ. N’ihi ya, ọ na-esiri m ike ime ka uche m dịrị n’ihe m na-agụ ma m gụwa Baịbụl. M gbalịsikwuru ike ka uche m na-adị n’ihe m na-agụ, ya emee ka m jirizie nke nta nke nta hụwa Jehova n’anya. Ma, akọnuche m bidoro nyewe m nsogbu. Ọtụtụ mgbe, m na-eche na o nweghị uru m bara, ọ na-adịkwa m ka Jehova agaghị agbaghara m ihe ọjọọ niile m mere. Ihe kasiri m obi n’oge ahụ bụ akụkọ Eze Devid. Jehova gbaghaara ya mmehie ndị dị oké njọ o mere. Ịgụ akụkọ ya nyeere m ezigbo aka.—2 Samuel 11:1–12:13.
Ihe ọzọ siiri m ike bụ ịga n’ụlọ ndị mmadụ zie ha ozi ọma. (Matiu 28:19, 20) Ụjọ na-atụ m na m nwere ike ịhụ onye m mejọrọ n’oge gara. Ma, m ji nwayọọ nwayọọ kwụsị ịtụ ụjọ. Inyere ndị mmadụ aka ka ha mata Nna anyị nke eluigwe, bụ́ onye na-agbaghara ndị mmadụ mmehie ha, bidoro tọwa m ụtọ.
Ihe m mụtara banyere Jehova zọrọ m ndụ. Ọtụtụ ndị mụ na ha na-akpabu anwụọla, e nwekwara ndị nke nọ n’ụlọ mkpọrọ. Ma ndụ m dị m ụtọ ugbu a, m nwekwara olileanya na ihe ga-aka mma n’ọdịnihu. Amụtala m iweda onwe m ala na irube isi. Akwụsịkwala m iwe iwe ọkụ. Ihe ndị a emeela ka mụ na ndị mmadụ na-adị ná mma. M lụọla nwaanyị. Aha ọmarịcha nwunye m bụ Carmen, mụ na ya na-ebikwa n’udo. Obi na-atọ mụ na ya ezigbo ụtọ ịkụziri ndị mmadụ Baịbụl.
M na-arụ ezigbo ọrụ ugbu a. M na-agakwa n’ụlọ akụ̀ mgbe ụfọdụ. Ma, ihe mere m ji aga abụghị ka m zuo ohi, kama ka m mee ka ọ dị ọcha.
Chọpụta azịza ajụjụ a na-ajụ gbasara otú anyị si amụrụ ndị mmadụ Baịbụl.